Tababarka Photoshop: Saamaynta xawaaraha | Abuurista khadka tooska ah
Tababar Photoshop: xawaaraha xawaaraha
Abuuritaanka saameynta xawaaraha waa mid aad u fudud isticmaalka Asawir Photoshop. Waa saameyn aad loo isticmaalay tan iyo markii ay na siin doonto firfircoonaan badan iyo awood muujinta sawirka aan ku shaqeyneyno.
Waxaan kaaga digayaa inaanan helin waqti kasta oo aan jeclaan lahaa inaan sameeyo casharka, markaa natiijada waa inay kaamil noqotaa, laakiin waxaan isku dayay inaan talaabooyinka oo dhan u dhigo sida aad u fahmayso oo aad ugu dabaqi karto halabuur u gaar ah. Iyadoo aan waxbadan la dhihin, Waxaan rajeynayaa inaad u aragto inay waxtar leedahay.
Waxay noqon doontaa muhiim inaan dooranno sawir aad u firfircoon ama sawir. Xaaladdan oo kale waxaannu dooran doonnaa sawir gabar orod ah. Sidoo kale xisaabta ku fiirso fiiqnaanta, cabbirka iyo tayada sawirka, qeexitaanka ugu fiican ee uu leeyahay, ayaa sida ugu wanaagsan ee saamayntu noqon doontaa. Markaad xulato sawirkeena adoo tixgelinaya waxaas oo dhan, waxaan aadi doonnaa aaladda xulashada ee aan dooneyno.
Waxaan dooran doonnaa sawirka (ma ahan inay ahaato xulasho sax ah, way ku filnaan doontaa inay ku koobnaato jirkiisa oo dhan iyo gaar ahaan lugaha iyo gacmaha, kuwaas oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan kiiskan).
Waxaan ka faa'iideysan karnaa xulashooyinka si aan ugu darno xulashada ama kala-goynta xulashada si aan u saxno midka aan markii hore sameynay. Waxaan sidoo kale ku isticmaali karnaa xulashooyinkaas furayaasha Alt (si loogu daro aagga xulashadayada) iyo Ctrl si loo jaro. Sida iska cad haddii aad waqti heysato oo aad rabto inaad hesho natiijo xirfad leh, waa inaad abuurtaa xulasho sax ah oo aad ku sameysaa faahfaahin badan.
Markii aan ku qanacno xulashada la sameeyay, waxaan aadi doonnaa Ctrl + J oo waxaan ku soo koobi doonaa lakab cusub oo kaliya xulashadan, taas oo ah, jirka gabadha dhallintayar. Waxaan ka shaqeyn doonnaa lakabkan, kaas oo noqon doona midka soo bandhigaya qallooca saameynta.
Tallaabada xigta, iyo tan ugu muhiimsan, waxay noqon doontaa in la aado aaladda farta, oo ku taal hoosta rinjiga daaqada qalabka. Xaaladdan oo kale waanu ilaalin doonnaa xoojinta waxtarka (halbeegga oo ku yaal aagga dhexe ee sare ee is-dhexgalka) ee Photoshop uu noogu keenayo si caadi ah (50%) Laakiin waxay kuxirantahay ujeeddadaadu tahay iyo adkaanta saameynta aad raadinta, waan kordhin doonaa ama yareyn doonaa qiimahan.
Ku sii wadida xulashadayada waxaan tagi doonaa Tifatir> Qeex qiimaha burushka ...
Daaqad pop-up ah ayaa soo muuqan doonta halka aan ku badbaadin karno burushkayaga cusub oo leh qaabka xulashada. Waxaan ugu magac dari doonnaa kiiskan «Gabar ordaya».
Marka aan riixno OK, burushkan waxaa si otomaatig ah loogu keydin doonaa bangigayaga burushka. Photoshop badanaa waxay u dhigaan iyaga markii ugu dambeysay marka loo eego. Doorashadan waa mid aad u wanaagsan haddii aan dooneyno inaan ku sameysano halabuur burushkeena isla markaana aan tijaabino hal-abuurnimadeena marka aan sameyneyno shaambado noo gaar ah.
Xusuusnow inaad doorato aaladda farta markasta. Qalabkani wuxuu qaban doonaa waa jiidayaa pixels si ay u hadlaan, u jajabiyaan sawirkeenna (sida aan farta ku qabanno markaan qarinno sawirrada qalinkeenna tusaale ahaan).
Waxa soo socda ee aan sameyn doonno ayaa ah, xulashada buraashkan cusub, iskuna dul saar muuqaalka dabeecadda oo jiid. Waxaan ku celin karnaa ficilkan si isdabajoog ah illaa aan ka qancno. Way ku habboon tahay ka hor intaadan tallaabadaas qaadin, inaad wax maskaxda ku hayso. Waxaan aadi doonnaa qeybta hore ee burushyada iyo daaqadda soobaxda ee u muuqata waxaan joojin doonnaa sanduuqa la yiraahdo "kala dheereynta". Haddii aynaan taas hagaajin, waxa ugu macquulsan ayaa ah in kumbuyuutarku si gaabis ah u gaabin doono sidoo kalena saameyntu si wanaagsan uma shaqeyn doonto.
Waxay noqon doontaa mid ku habboon in goor dambe aan ku abuurno maaskaro lakab cusub lakabka sare oo aadno aaladda burushka. Iyada oo midab madow leh, waxaan bilaabi doonnaa inaan ka tirtirno saameyntan gaar ahaan xagga hore. Waxa na xiiseynaya ayaa ah in aagga bidix uu aad u fiiqan yahay saameyntana waxaa lagu muujiyaa oo keliya qeybta dambe ee jirka. Ha iloobin inaad xafido maaskaro lakab ah intii lagu jiray howshan.
Si aan u siino firfircooni dheeri ah waxaan aadi doonnaa aaladda isbeddelka. Waxaad horeyba u ogayd inaad ku heli karto xulashadan adigoo riixaya Ctrl + T ama ku hagaaji menu> Beddelka. Qaybta midig ee kore ee isugeynta, dhowr badham ayaa soo muuqan doona. Waxaan gujin doonnaa «Isbeddelka u dhexeeya isbeddelka bilaashka ah iyo qaababka qallooca». Markaad dhaqaajineyso dejintan, nooc shabag ah ayaa noo muuqan doona si aan u qaabeyno sawirka marka la doono. Xaaladdan oo kale waxaan ku ciyaari doonnaa labada daraf ee hoose ee shabakadda si aan u siino dhammaystir ka sii wanaagsan.
Ugu dambeyntiina, waan nadiifin doonnaa dhammaan faahfaahinta si aan u tixgelinno oo ugu darno geeddi-socodka burushkayaga maaskaro lakabka ah. Tusaalahan runtii waa in dib loo cusboonaysiiyaa oo la sifeeyaa, laakiin way kuu fiicantahay inaad fahamto farsamada iyo talaabooyinku si fiican ayey u shaqeyn doonaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tababar Photoshop: xawaaraha xawaaraha
Waan ka mahadcelineynaa dhammaan casharradan Isbaanishka oo wax badan ka caawiya taageerayaasha adduunka ee wax ka beddelka sawirka.
Ku jawaab felipon
Taariikh Xayeysiinta: Taariikhaha Lama iloobi Karo (I)
Farsamooyinka qancinta xayeysiinta